Phakathi odokotela cishe konke mayelana menopause ubizwa ngokuthi inkathi enzima ekuphileni sowesifazane. Ochwepheshe bathi lokhu kubangwa izinguquko ukuthi sebeqala zenzeka emzimbeni minyaka engamashumi amane nanhlanu noma amashumi amahlanu. Kuze kube kuleli qophelo, njengoba umthetho, kukhona umsebenzi asebenzayo ezikhiqiza amaqanda. Laba balimi bafakela umzimba nge-estrogen - hormone zesifazane. Njengoba sisondela yobudala engamashumi amane nanhlanu yomsebenzi wesibeletho kancane kancane kunciphisa. Le nqubo kuhambisana izimpawu ezithile. Lezi zihlanganisa, ngokukhethekile, kukhuphuke ukujuluka, ikhanda. Njalo engenzeka futhi inhliziyo ukuhlaselwa, kanye mhlawumbe inkinga yokulala. Futhi izinguquko zangaphandle zenzeka: isikhumba iqala ukulahlekelwa umswakama waso nokuqina, imibimbi avele angabacwasi ngokushesha, kokushintsha isimo kwebele. Ngaphezu kwalokho, abanye besifazane babe ukwanda isisindo, kukhona fat ngokweqile emathangeni nezinqe. Nokho, omunye imiphumela emibi kakhulu lesi sifo climacteric ubhekwa ukukhumuzeka kwamathambo. Lesi sifo livela ngenxa yokuntuleka kwe-calcium, abatholako okuyinto eyenzeka insufficiently ngenxa yokushoda estrogen emzimbeni. Ngenxa yalokho, amathambo abe ziyaqothuka, mncane. Ngakho ngisho olimele kungabangela ukulimala kuyindaba eqakathekileko.
Kumele wathi ukuthi isiginali lokuqala ekuqaleni kabusha umzimba, zokugcina esikhathini. Uma izimpawu ziqale kuphakama, ngenhla. Owesifazane angase abonakale sengathi ukulunywa lwesitho sangasese sowesifazane, uvalo ukukhathala. Njengoba enye yezindlela yokuqeda izimpawu ayesetshenziswa odokotela yokwelapha i-hormone. Lezi noma ngezinye izindlela esiyakuqokwa ukuze andise ezingeni estrogen. ukwelashwa kwama-hormone kwabesifazane ungase wakhiwe progestogens. Imikhiqizo equkethe i-estrogen kuphela ezinqunyiwe a hysterectomy. Kulesi yokwelapha wenziwa imodi eqhubekayo. Kumele kuqashelwe ukuthi le ndlela yokwelapha yakhelwe ukuze akhulule abesifazane kuzo zonke izinkinga ezihambisana ke ukuya esikhathini.
ukwelashwa kwama-hormone kwabesifazane. Izici isicelo
Kufanele kuqashelwe ukuthi ukusetshenziswa esizimele izimali ezithile esimweni amukelwe. Ukuvakashela endocrinology kuyadingeka. Ukunikezwa Imvume Yokuthola Umuthi kwemithi Kwenziwa ngokuqinile ngamunye. Ngaphezu kwalokho, kuyo yonke indlela yokwelapha, kweso lwezokwelapha kuyadingeka. Litjho saziso ukuqapha isimo nezindlala mammary, uhlelo zokuzala. Ngesikhathi esifanayo njalo kumele kwenziwe ucwaningo ku khona amangqamuzana omdlavuza e nezicubu.
Ethandwa kakhulu ukwelashwa kwama-hormone kwabesifazane
Kusho "Trisekvens" "Livial", "Kliogest" eyenzelwe unomphela (eqhubekayo) izicelo. Packing izidakamizwa ngalinye kufaka amaphilisi amabili nesishiyagalombili. Kumele ukuthi zokugcina imikhiqizo ezimbili ebekiwe emva kweminyaka embalwa ngemva kokuba yasungulwa nambili kuya kwabadala. Okunjalo ukwelashwa kwama-hormone i-abesifazane ngokuthi "Premarin", "Proginova", "estrofem" engabelwe ukususwa kwesibeletho. Njengomthetho, yokwamukela imithi enjalo kwenziwa izifundo nge iziphazamiso ambalwa.
Biography Lermontov: into ebaluleke kakhulu ekuphileni imbongi